पत्रपत्रिकाबाट Archives - Page3of 92 - Purbeli News
बिहीबार मोरङको बेलबारीमा आमाको हत्यापछि छोरा आफैले आत्महत्या गरेको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनायो । खाना खाने क्रममा बिहान बेलबारी नगरपालिका ४ स्थित बुधबारेका २६ वर्षीय जीवन लिम्बुले जन्मदिने ६१ वर्षीया देवीकुमारी लिम्बुलाई टाउकोमा इँटा प्रहार गरी घरमै हत्या गरे । आमाको हत्यापछि उनले निकै बीभत्स रूपमा हँसिया र छुराले घाटी रेट्नुको साथै छातीमा धेरै प...
काठमाडौं । सरकारले कक्षा पाँचसम्म पढ्ने मुलुकभरका सबै सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्। मुलुकभरका २८ हजार सरकारी विद्यालयमा पढ्ने कक्षा पाँचसम्मका २८ लाख विद्यार्थीले यस्तो सुविधा पाउनेछन्। दि...
काठमाडौँ । सरकारले केही पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क बढाएपछि मुल्य बढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्कमा सामान्य वृद्धि गरिएको घोषणा गरे । त्यस्तै, सुन र सुनका गरहनामा पनि भन्सार शुल्क वृद्धि गरेको उनले घोषणा गरे । यता, हवाइ इन्धनमा ...
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको संकटबीच संयमित बजेट ल्याएका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेटले अपेक्षा गरेको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने सजगता अपनाएको छ । कोभिड महामारीका कारण स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा हुन सक्ने संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आव...
काठमाडाैं । आगामी आवका लागि सरकारले राजस्वको अनुमान यथार्थपरक गरे पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानतर्फ पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो अंक राखेको छ । आगामी आवमा आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन चालू आवको यथार्थ संकलनको करिब ८ प्रतिशत मात्रै बढी हो, जुन यथार्थपरक छ । चालू आवमा आठ खर्ब २७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान स...
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आवमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने घोषणा गरे । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसधान खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती...
काठमाडाैं । आगामी बजेटले रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको बजेटसमेत बढाइँदै छ ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो कार्यक्रम आफैँ बनाऊँ, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको दाबी छ । श्रममूलक उद्यो...
काठमाडाैं । लकडाउन सुरु भएयता सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राहत वितरण गरेको छ । लकडाउनका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएका असंगठित मजदुर, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा १० लाख ७५ हजारजनालाई राहत वितरण गरेको विवरण स्थानीय तहबाट आएको मन्त्रालयको भन...
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिन समय माग गरेपछि संविधान संशोधन विधेयक बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन। सरकारले जारी गरेको मुलुकको नयाँ नक्सा, सीमाको रक्षा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विषयमा सिंगो मुुलुक एक ठाउँ रहेको सन्देश दिन दलहरूले संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छ...
बेइजिङ । चिनियाँ सर्वेक्षकहरूको एक टोलीले बुधबार विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी सुरु भएयता सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको यो पहिलो टोली हो । चिनियाँ सञ्चार माध्यमका अनुसार उचाइ पुन: मापन गर्नका लागि टोलीले सगरमाथाको आरोहण गरेको हो । भाइरसको महामारीका कारण नेपाल र चीनको सीमामा पर्ने सगरमाथाको आरोहण ग...